एसिया कपमा युएई विरुद्ध नेपालकाे विशाल जीत::देश र जनताप्रति समर्पित
एसिया कपमा युएई विरुद्ध नेपालकाे विशाल जीत
काेलम्बाेमा जारि यू-१९ एसिया कप क्रिकेटकाे अन्तिम खेलमा नेपालले युएईलाई विशाल रनकाे अन्तरले पराजित गरेकाे छ । आज भएकाे अन्तिम खेलमा युएईलाई १ सय ६० रनको फराकिलो अन्तरले पराजति गरेकाे हाे । यद्यपी युएई र नेपाल दुवै श्रीलंका र बंगलादेशसँग पराजित हुँदै सेमीफाइनल पुग्न असफल भइसकेका छन् ।
सोमपालको सानदार खेल : अफ्रिदीलाइ गरे आउट
आइसीसीको नयाँ वरियतामा धोनीलाइ पारसले पछि पारे
पारसको कप्तानीमा १५ सदस्य टोलीको घोषणा, ज्ञानेन्द्र नखेल्ने, को-को परे ?
क्रिकेट टोलीको घोषणा, को को परे टोलीमा ?
क्रीकेटमा नेपालको विश्व रेकर्ड रोहित पौडेल बने अर्धशतक बनाउने विश्वकै कान्छो ब्याट्सम्यान